Sicela ukufuniswa ubaba ka Kwanele Ngubane umama wakhe ongasekho emhlabeni wayehlala kwaNyavu oPhokweni. Onolwazi angaxhumana noSonhlalakahle uNdwandwe ku 031 7857195
Sicela umama kaSyanda no Owethu Phakathi owayehlala eThamboville. Igama lakhe uSamkelisiwe Dlamini. Onolwazi angathintana ne-Social Worker uMchunu ku 033 3928261
Sicela ukufuniswa ubaba kaNokwanda Zaca ozalwa nguBuyisile Anna Zaca ongasekho owayehlala etsheni e-Elandskop. Sicela onolwazi athintane nosonhlalakahle uMqadi ku 033 5050083
Sicela ukufuniswa ubaba ka-Aphile Madlala ongaziwa. Igama likamama wakhe u-Charity Thobile Madlala owayehlala kwaDabeka e-KK. Sicela onolwazi athinte uSonhlalakahle uKheswa ku 033 3968621
ISobantu Clinic ithanda ukudlulisa ukubonga kuzo zonke izinhlaka eziyixhase kade inosuku lwe-Youth Wellness. Phakathi kwabalula isandla iKhethimpilo NGO, uCass Schwegmann, iMfenendala Legacy Trust, uMnuz uDladla we-Zakes Store, abasebenzi baseSobantu Clinic kanye nekomidi lakhona.
Sicela ukufuniswa ubaba ka Ayanda Mdluli umama ongasekho emhlabeni wayehlala kwaNyavu eNgangezwe.
Sicela ukufuniswa ubaba kaNtokozo Ngidi, umama wakhe ongasekho emhlabeni owayehlala eMiddlovu Ngilanyoni. Onolwazi angaxhumana no Social Worker Mthiyane ku 031-7851193
Sicela ukufuniswa ubaba kaThato no Mbali Khumalo umama wabo ongasekho emhlabeni owayehlala kwaNyavu. Sicela onolwazi axhumane no Social Worker uNdwandwe ku 031 7881195
Sicela ukufuniswa ubaba kaNontando Dimba umama wakhe ongasekho emhlabeni wayehlala eMkhambathini.
Sicela ukufuniswa ubaba kaSibahle Majozi ongaziwa. Igama likamama wakhe uKhanyisile Majozi wakwa-Gezubuso etafuleni. Sicela onolwazi athintane noSonhlalakahle u P. Zungu ku 033 5050084
USonhlalakahle uN.K Dlamini ucela ukufuniswa umndeni ka Nikita Camp.
USonhlalakahle uN.K Dlamini ucela ukufuniswa umndeni kaNomcebo Mkhize owaziwa ngo” PUM”.
USonhlalakahle uN.K Dlamini ucela ukufuniswa umndeni kaNosipho Dlamini
USonhlalakahle uN.K Dlamini ucela ukufuniswa umndeni ka Njabulo Msimango no Nompilo Msimango
USonhlalakahle uN.K Dlamini ucela ukufuniswa umndeni kaWendy Mkhwanazi noLusanda Mkhwanazi kanye noSbongakonke Mkhwanazi
Sicela Owazi Umama ka-Amkelani Makhoba ogama lakhe lingu Makhoba Nokukhaya. Athinte Usonhlalaka u K. Dobson Kulenombolo 033-3928621 or 033 3928649.
Sicela ukufuniswa ubaba ka Zondi Thandiwe owazalwa 15 kuMashi 2005. Umama kaThandiwe kwakunguZondi Thembeni ongasekho emhlabeni kanti ubaba wakhe akaziwa. Kucelwa onolwazi axhumane noSonhlalakahle uNomusa Zondi osebenza emnyangweni wezokuthuthukiswa komphakathi eNew Hanover kulenombolo 0335020074.
Sicela ukufuniswa ubaba ka Zulu Andiswa owazalwa 09 kuDisemba 2003. Umama kaAndiswa kwakunguZulu Thandiwe Veronica ongasekho emhlabeni kanti ubaba wakhe kwakunguDumisani Mchunu owaseSwayimane, ngokusebenza wayeseWartburg. Kucelwa onolwazi axhumane noSonhlalakahle uNomusa Zondi osebenza emnyangweni wezokuthuthukiswa komphakathi eNew Hanover kulenombolo 0335020074.
Umphithi Arts Company uzobe une-Theatre Festival eSukuma Comprehensive School eMbali mhlaka 20 no 21 ku August. Lenkampani kumanje yenza ama-selections alabo abazoba yingxenye yalefestivali. Abafuna eminye imininingwane bangaxhumana no Gcina Mdluli ku 072 5452942 okanye bathumele umyalezo we-email ku umphithiartscompany@gmail.com okanye bavakashele iwebsite yabo www.umphithiartscompany.co.za
Sicela ukufuniswa umama ka Amthanda Dlamini ongu Zanele Dlamini no baba wakhe owaziwa ngela Madumi onolwazi angathinta u Social worker N.Madlala ku 033 3928621